DOWNLOAD UPLAY_R1_LOADER.DLL - DLL - 2019
Debe nsogbu ahụ na uplay_r1_loader.dll
Ntanetị Bluetooth na-emekarị ụbọchị ndị a. Iji ngwaọrụ a, ị nwere ike jikọọ ngwa ngwa dị iche iche na ngwa egwuregwu (òké, isi ihe, wdg) na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ. Na mgbakwunye, anyị ekwesịghị ichefu ọrụ ọrụ data na-enyefe data n'etiti smartphone na kọmputa. Ndị na-eme mgbanwe dị otú ahụ dị n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ ọ bụla. Na PC ndị na-anọ ọdụ, ngwá ọrụ dị otú ahụ anaghị adịkarị nkịtị ma na - emekarị dị ka ngwaọrụ mpụga. Na nkuzi a, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi arụnye ngwanrọ ntanetị Bluetooth maka Windows 7 sistemụ arụmọrụ.
Ụzọ iji budata ọkwọ ụgbọala maka nkwụnye Bluetooth
Chọta na wụnye akụrụngwa maka ndị nnweta a, yana ngwaọrụ ọ bụla n'eziokwu, n'ọtụtụ ụzọ. Anyị na-enye gị ọtụtụ omume ga-enyere gị aka n'okwu a. Ya mere, ka anyi bido.
Usoro 1: Ụlọ ọrụ gọọmenti nke ndị na-emepụta katọnboard
Dị ka aha ahụ na-atụ aro, usoro a ga-enyere aka ma ọ bụrụ na ị nwere nkwụnye Bluetooth ejikọrọ n'ime motherboard. Chọpụta ihe nlereanya nke nkwụnye dị otú ahụ nwere ike isi ike. Na na saịtị nke ndị na-emepụta katọn na-enwekarị ngalaba na ngwanrọ maka ihe niile jikọtara. Ma nke mbụ, anyị ga-ahụ ihe nlereanya na emeputa nke motherboard. Iji mee nke a, mee usoro ndị a.
Push bọtịnụ "Malite" na nkuku ala aka ekpe nke ihuenyo.
Na windo nke meghere, chọọ nyocha dị n'okpuru ma tinye uru na yacmd. N'ihi ya, ị ga-ahụ faịlụ ahụ dị n'elu ahụ aha a. Gbaa ya.
Na window windo oghere, mepee iwu ndị na-esonụ. Echefukwala pịa "Tinye" mgbe ha banyere na nke ọ bụla n'ime ha.
wmic baseboard nweta Emeputa
Wimic baseboard nweta ngwaahịa
Iwu nke mbụ na-egosiputa aha onye na-emepụta nke osisi gị, nke abụọ - ihe nlereanya ya.
Mgbe ị nụchara ihe niile dị mkpa, gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị na-emepụta mbadamba. N'ihe atụ a, nke a ga-abụ ebe nrụọrụ ASUS.
Na saịtị ọ bụla e nwere nchọnchọ. Ikwesiri ịchọta ya ma tinye n'ime ya ihe nlereanya nke motherboard gị. Mgbe pịa nke a "Tinye" ma ọ bụ akara ngosi nke na-eto eto, nke a na-esokarị n'akụkụ ebe nchọta.
N'ihi ya, ị ga-ahụ onwe gị na ibe ebe ịchọta ọchụchọ niile maka ọchụchọ gị ga-egosipụta. Anyị na-achọ nne na nna anyị ma ọ bụ laptọọpụ na ndepụta ahụ, ebe ọ bụ na ikpe ikpe a, onye na-emepụta na ihe nlereanya nke motherboard kwekọrọ na onye na-emepụta na ihe nlereanya nke laptọọpụ. Ọzọ, pịa nanị aha ngwaahịa.
Ugbu a, a ga-akpọrọ gị na ibe nke ngwaọrụ ndị a họrọ. Na ibe a, taabụ ga-adị ugbu a "Nkwado". Anyị na-achọ ihe yiri nke ahụ ma ọ bụ yiri ma pịa ya.
Akụkụ a gụnyere ọtụtụ ihe dị n'okpuru akwụkwọ, akwụkwọ ntuziaka na ngwanrọ maka akụrụngwa ahọpụtara. Na ibe na-emepe, ị ga-achọ ngalaba nke aha aha ya pụtara "Ndị ọkwọ ụgbọala" ma ọ bụ "Ndị ọkwọ ụgbọala". Pịa na aha nke dị otú ahụ nkebi.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ sistemụ arụmọrụ na njirimara iwu nke bit. Dịka iwu, a na-eme nke a na menu ihe ndapụta pụrụ iche, nke dị n'ihu ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala. N'ọnọdụ ụfọdụ, a gaghị agbanwe agbanwe ikike, ebe ọ bụ na a ga-ekpebi ya iche. Na mpaghara a, họrọ ihe "Windows 7".
Ugbu a n'okpuru ebe a ị ga-ahụ ndepụta nke ndị ọkwọ ụgbọala niile ịchọrọ ịwụnye maka motherboard ma ọ bụ laptọọpụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ekewa software niile n'ime edemede. Emere ya maka nyocha dị mfe. Anyị na-achọ na mpaghara ndepụta "Bluetooth" ma mepee ya. N'akụkụ a, ị ga - ahụ aha onye ọkwọ ụgbọ ala, nha ya, nsụgharị na ụbọchị ịhapụ ya. N'akaghi, enwere ike inwe bọtịnụ nke na-enye gị ohere ibudata ngwanrọ ahọrọ. Pịa bọtịnụ nke na-ekwu "Download", Download ma ọ bụ foto kwekọrọ na ya. N'ihe atụ anyị, bọtịnụ dị otú a bụ onyinyo floppy na aha "Global".
Nbudata nke faịlụ nwụnye ma ọ bụ na-echekwa ihe dị mkpa ga-amalite. Ọ bụrụ na ibudatara ebe nchekwa ahụ, echefula iwepụ ihe niile dị na ya tupu echichi. Mgbe nke ahụ gasịrị, gbanye faịlụ a kpọrọ "Mbido".
Tupu ị na-agba ọsọ ọkachamara, ị nwere ike ịjụ ịhọrọ asụsụ. Anyị na-ahọrọ na uche anyị wee pịa bọtịnụ "OK" ma ọ bụ "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nkwadebe maka ntinye ga-amalite. Sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị, ị ga-ahụ window nke usoro mmemme ahụ. Naanị nkwado "Na-esote" na-aga n'ihu.
Na windo na-esote ị ga-ekwupụta ebe a ga-arụ ọrụ ahụ. Anyị na-akwado ịhapụ uru bara uru. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị gbanwee ya, wee pịa bọtịnụ kwekọrọ. "Gbanwee" ma ọ bụ "Chọgharịa". Mgbe nke a gasịrị, dee ebe dị mkpa. N'ikpeazụ, pịa bọtịnụ ọzọ. "Na-esote".
Ugbu a, ihe niile ga-adị njikere maka nrụnye. Ị nwere ike ịmụta banyere ya site na window ọzọ. Iji malite usoro ngwanrọ pịa bọtịnụ "Wụnye" ma ọ bụ "Wụnye".
Ntinye nke ngwanro ga-amalite. Ọ ga-ewe nkeji ole na ole. Ná ngwụsị nke nwụnye ahụ, ị ​​ga-ahụ ozi banyere ọganihu nke ịrụ ọrụ nke ọma. Iji mezue, pịa bọtịnụ ahụ. "Emere".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, reboot usoro ahụ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị na windo na-egosi.
Ọ bụrụ na emere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ "Onye njikwa ngwaọrụ" Ị ga-ahụ ngalaba dị iche na nkwụnye Bluetooth.
Usoro a zuru oke. Biko mara na n'otu akụkụ, ọ nwere ike ịba uru nye ndị nwe ntanetị. Na nke a, ị ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ma site na "Chọọ" chọta ihe nlereanya ngwaọrụ gị. A na-egosiputa ndị na-emepụta na ihe nlereanya nke ngwa ahụ na igbe ma ọ bụ na ngwaọrụ n'onwe ya.
Usoro 2: Akụrụngwa software melite mmemme
Mgbe ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ maka ihe ntanetị Bluetooth, ị nwere ike ịkpọtụrụ mmemme pụrụ iche maka enyemaka. Ihe kacha mkpa na ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị dị otú a bụ na ha na-iṅomi kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ, ma chọpụta ihe niile ịchọrọ ịwụnye software. Okwu a dị nnọọ ukwuu na anyị enyefewo ya ihe ọmụmụ dị iche iche na ya, ebe anyị nyochaa ụlọ ọrụ ndị a ma ama nke ụdị a.
Kedu usoro inye ihe - nhọrọ dịịrị gị. Ma anyị na-akwado ndụmọdụ ọkwọ ụgbọala DriverPack. Ngwa a nwere ma mbipute n'Ịntanet na nchekwa data nchekwa. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-enweta mmelite mgbe nile ma gbasaa ndepụta nke ngwa ndị a na-akwado. Esi kọwapụta software site na iji Ọkwọ ụgbọalaPack na-akụziri anyị.
Nzọụkwụ 3: Chọọnụ software site na NJ ngwaike
Anyị nwekwara isiokwu dị iche iche nke a raara nye usoro a n'ihi ụda ozi. N'ime ya, anyị kwuru banyere otu esi achọpụta ID na ihe ị ga-eme ya. Biko mara na usoro a bụ eluigwe na ụwa, dịka o kwesịrị ekwesị maka ndị nwe ihe ntanetị arụmọrụ na mpụga n'otu oge.
Pịa igodo ahụ n'otu oge na keyboard "Merie" ma "R". Na ntinye ngwa ngwa Gbaa ọsọ dee otudevmgmt.msc. Ọzọ, pịa "Tinye". N'ihi ya, windo ga-emeghe. "Onye njikwa ngwaọrụ".
Na ndepụta nke ngwa anyị na-achọ ngalaba. "Bluetooth" ma meghee eri a.
Na ngwaọrụ ahụ, pịa bọtịnụ òké aka nri ma họrọ akara na ndepụta ahụ "Melite ndị ọkwọ ụgbọala ...".
Ị ga-ahụ window nke ị ga-achọ ịhọrọ ụzọ iji chọọ software na kọmputa gị. Pịa na akara mbụ "Nchọpụta akpaaka".
Usoro nke ịchọta ngwanrọ maka ngwaọrụ a họrọ na kọmputa amalite. Ọ bụrụ na usoro ahụ na-ejikwa ịchọta faịlụ dị mkpa, ọ ga-etinye ha ozugbo. N'ihi ya, ị ga-ahụ ozi gbasara mmezu nke usoro ahụ.
Otu n'ime ụzọ ndị e depụtara n'elu ga-enyere gị aka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nkwụnye ọkụ Bluetooth gị. Mgbe nke ahụ gasị, ị nwere ike jikọọ ngwaọrụ dị iche iche na ya, yana ịnyefe data site na smartphone ma ọ bụ mbadamba na kọmputa na azụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ gbasara isiokwu a, chee na ị gaghị enwe ike ịde ha na nkwupụta. Anyị ga-enyere aka ịghọta.